संसदमा अनौठो संयोग: ऊर्जामन्त्री बोल्दाबोल्दै बत्ती अफ, सांसदहरुद्वारा बिल्ला ! | Kendrabindu Nepal Online News
संसदमा अनौठो संयोग: ऊर्जामन्त्री बोल्दाबोल्दै बत्ती अफ, सांसदहरुद्वारा बिल्ला !
२३ श्रावण २०७६, बिहीबार १७:२३
बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अनौठो संयोग जुरेको छ।
आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिने कार्यतालिका थियो। सोही कार्यतालिका अनुसार मन्त्री पुनले देशमा बिजुलीको अवस्थाबारे सम्बोधन गरिरहेका थिए। तर, संयोगवश बोल्दाबोल्दै संसदको बत्ती निभ्यो।
ऊर्जामन्त्रीले बिजुलीकै विषयमा बोलिरहँदा बत्ती निभ्नुलाई सामान्य संयोग मान्न सकिन्न। त्यसैले पनि होला संसदमा उपस्थित सांसदहरुले यो संयोगको गतिलै फाइदा उठाए।
बत्ती निभ्ने वित्तिक्कै सांसदहरुले टेवल ठोक्दै गललल हाँसे । यो हाँसो ऊर्जामन्त्रीप्रतिको ‘बिल्ला’ पनि थियो । सांसदहरु मात्रै होइन सम्बोधन गरिरहेका ऊर्जामन्त्री पुनले पनि हाँस्दै धन्यबाद दिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले मन्त्रीले बोल्दै गर्दा बत्ती निभ्नुले देशको विद्युत आपूर्ति अवस्था दर्शाउने भन्दै टिप्पणी गरे ।
संसदमा बोल्दै मन्त्री पुनले दुई वर्षभित्र जुम्लामा केन्द्रीय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने बताए ।
मन्त्री पुनले जुम्लामा केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमार्फत विद्युत् सेवा पुर्याउन आवश्यक प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिए । उनले सुर्खेतबाट ८१ किलोमिटर लामो ३३ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको उल्लेख गर्दै ठेकेदारले सर्वेक्षण अन्तिम चरणमा पुर्याएको र आगामी दुई वर्षभित्र राष्ट्रिय ग्रीड पुर्याउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको बताए ।
राष्ट्रिय ग्रीड नपुगेसम्म तत्कालका लागि अस्थायीरुपमा कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको ३०० केभीए क्षमताको डिजेल जेनेरेटर जुम्ला लैजान आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिएको मन्त्री पुनको भनाइ छ ।
वर्षमान पुन, संसदमा अनौठो संयोग
Prevअब सार्वजनिक यातायातको भाडा नतिर्नेलाई ५ हजार सम्म जरिवाना
रेडक्रसको राहत चोर्ने ४ जना पक्राउNext
ऊर्जामन्त्रीद्वारा माथिल्लो तामाकोशीको निरीक्षण, भौतिक प्रगति कति ?